Ahịa Ọkachamara nke Ọkachamara 7 Usoro Ntanetị Websaịtị
Nchịkọta weebụ bụ usoro mgbagwoju anya nke na-agụnye iwepụ ozi ma ọ bụ data sitere na saịtị, na ma ọ bụ na-enweghị nkwenye nke onye na-webmaster. Ọ bụ ezie na a na-eji aka eme ihe n 'aka, ụfọdụ ntanetị weebụ nwere ike ịchekwa oge na ike gị. Ndị a bụ usoro na-enweghị atụ na enweghi ike ijide n'aka na njehie.
1. Ụdị Google:
A na-eji Google Sheets dịka ngwá ọrụ dị ike. Ọ bụ otu n'ime mmemme weebụ kachasị mma ma kachasị mma. Ọ bara uru nanị mgbe scrapers chọrọ ụdị ihe ntanetị ma ọ bụ data a ga-esi na blog ma ọ bụ saịtị. I nwekwara ike iji nke a iji chọpụta ma ọ bụrụ na saịtị gị dị na-egosi ma ọ bụ.
2. Usoro ederede ntanetị:
Ọ bụ okwu na-egosi mgbe niile na usoro UNIX grep na-asụ na asụsụ ndị a ma ama dịka Python na Perl.
3. Ntụziaka akwụkwọ: Usoro nchịkọta ihe:
Onye ọrụ ahụ n'onwe ya na-ede akwụkwọ ntuziaka na-ewe ọtụtụ oge na mgbalị. Ihe ka ukwuu n'ime ihe ndị a bụ ugboro ugboro ma na-ewe oge dịka ị ga-enwerịrị ọdịnaya sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ n'ekweghị ka ndị ntanetị weebụ mara banyere ọrụ gị. Ufodu mmemme na ndi mmepe weebụ na-eji bọtịnụ akpaghị aka maka nzube a.
4. Usoro ntinye HTML:
5. DOM Usoro nhazi:
Ihe Nlereanya Ihe Nlereanya (nke a makwaara dị ka DOM) bụ ụdị, ọdịnaya, na usoro nke ibe weebụ. tinyere faịlụ XML nke ọma. Ndị na-ede akwụkwọ na-eji ndị na-ahụ maka DOM maka nkọwa zuru ezu banyere ọdịdị na usoro nke ebe nrụọrụ weebụ. Ị nwere ike iji ndị DOM ndị a iji nweta akara nke ozi bara uru N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịnwale ngwaọrụ dịka XPath na scrape ọ bụrụ na ị na - ewepụta ihe niile na - eme ka ọ bụrụ na ị na - ewepụta ihe niile na - eme ka ọ bụrụ na ị ga -
6. Usoro nchịkọta anya:
B ụlọ ọrụ na azụmahịa na-ejikarị usoro mgbagwoju anya na nnukwu ike kọmputa. Ọ na-enye aka ileba anya na ndagwurugwu a kapịrị ọnụ ma na-agba data na igwe ojii ya. Emepụta na nlekota nke bọọlụ maka otu nhazi ihu na-eji usoro a, ọ dịghịkwa nnyonye anya mmadụ.
Ụzọ XML Asụsụ (obere oge edere dị ka XPath) bụ asụsụ ntụgharị ajụjụ nke ga-arụ ọrụ na akwụkwọ XML n'ụzọ ka mma. Ka akwụkwọ XML na-agụnye ọtụtụ akụkụ osisi, XPath nwere ike inyere ịnyagharị gafee osisi site na ịhọrọ ọnụ ndị dabeere na iche na njedebe ha. A na - ejikwa usoro a na - ejikọta ma DOM na - agba na HTML. Ọ bara uru iji wepụ ebe nrụọrụ weebụ niile ma bipụta ngalaba ya dịgasị iche iche weere ọnọdụ ndị chọrọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ụdị usoro a ma na-achọ ngwá ọrụ, ịnwere ike ịnwale Wget, Curl, Import.io, HTTrack ma ọ bụ Node.js Source .